आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन - Naya Online
बिहिबार, बैशाख २८, २०७४ (May 11th, 2017 at 8:36am ) ब्रेकिंग न्युज, ब्लग, राजनीति
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्दा भनेको नै पहिचान र अधिकारको हो । जससँग अन्तरसम्बन्धित विशिष्ठ पहिचान र समाथ्र्यमा आधारित अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू र स्वायत्त, संरक्षित, विशेष क्षेत्रहरू हुन् । संविधान संशोधन गरेर पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गरेर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गरिनुपर्ने, राज्यका हेरक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग राज्य सरकारले पटक–पटक गरेको २० र ९ बुँदेलगायत पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सम्पूर्ण सहमति/सम्झौताहरूअनुरुप राज्यको तर्फबाट कार्यान्वयन नभएका सहमतिहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूका प्रावधानहरू संविधान तथा नयाँ बन्ने ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्नेलगायत मुद्धाहरू नै आदिवासी आन्दोलनका मूलभूत मुद्दाहरू हुन् । जुन आदिवासी जनजाति महासंघको ठीक एक महिना अगाडिको राष्ट्रिय भेलाले समेत संश्लेषित गरेको छ । ती मुद्दाहरू राज्यले न्यूनतम रुपले पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ र ज्यूँकात्यूँ छन् । अझ भनौं, ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा एउटै राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईमा राख्न सकिने सम्भव हुँदाहुँदै आदिवासीको जनसंख्या नियोजित रूपमा खण्डीकृत गरिएका छन् । एकातिर, कुन गाउँ, टोल, क्षेत्र, भूगोललाई कुन पालिकामा राख्दा मसम्बद्ध दलले निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गरिएको छ । अर्कोतिर के कसरी सीमाना निर्धारण गर्दा उच्च जातीय ब्राह्मणवादी सत्ता र वर्चस्व कायमै राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । पालिकाका अघिकांश नामहरू ‘माई’, ‘श्वर’, ‘देवी’जस्ता शब्दहरू जोडेर हिन्दूकृत र संस्कृतकरण गरिएका छन् । हिजोका विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाविसहरूले टुक्राइएका आदिवासीका थातथलो र कलस्टहरू राज्यको पुनर्संरचनाले बसोबासको निरन्तरतालाई मध्यनजर गरेर एकै ठाउँ ल्याउँछ भन्ने आदिवासी जनतामा चाहना थियो तर त्यसको ठीक उल्टो झनभन्दा झन खण्डीकृत गरिएको छ । पुनर्संरचनाकारहरूको मानसिकता जिल्लावादी त छँदै थियो, जातीवादी पनि भएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको छ । जनसंख्यालाई विभिन्न नाममा क्षतविक्षत र खण्डीकृत बनाउने शासक जातिको षड्यन्त्रलाई आदिवासी जनजातिले नबुझी राजनीतिमा शासनाधिकार सजिलै प्राप्त हुन सक्दैन । आदिवासी दृष्टिकोणले भन्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना र कतिपय नामहरू पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनताको आंकाक्षा अनुरुप सुधार्न जरुरी छ । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुँदै प्रमुख भनिएका दलहरूलाई आदिवासी आन्दोलनले पटकौंपटक ज्ञापनपत्र दिँदै ध्यानकर्षण गराउँदा पनि नश्लीय जातिवादी सत्ताले पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ । सात प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको संरचनाले नेपालमा कायम रहेको संरचनागत विभेदको अन्त्य कदापि गर्न सक्दैन भन्ने ठहर आदिवासी आन्दोलनको हो ।
स्मरण गरौं, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक महिना अघि मात्रै गत चैत्र २९ र ३० गतेको राष्ट्रिय भेलाले संष्लेषण गरेको ६ बुँदे घोषणपत्र नै अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासी आन्दोलनको मूल ‘स्पिरिट’ हो । जसमा, संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिका आधारभूत सवालहरू सम्बोधन नगरेसम्म जुनसुकै निर्वाचनले तात्विक फरक आउने छैन भनेर प्रष्ट भनेको छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरिएकाले नै निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर आदिवासी आन्दोलनले भनेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमा रहेर महासंघको मूल नेतृत्वहरू निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफैमा आदिवासी जनताको विश्वास जित्नु हो, घोषणा पत्रमा प्रष्ट भनिएको छ । जसले आदिवासी आन्दोलनको शिर माथि उठाउँछ नै । किनकी नेफिन भनेको सबै आदिवासी जनताको साझा ब्यानर भएकोले प्रष्टै देखिने नै गरी कुनै एउटा दलको कार्यकर्ताजस्तो कार्य गर्नु आफैमा साझा प्लेटफर्मको दुरुपयोग हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता शब्दहरूलाई संविधानमा स्वीकारिएको त छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । तर तिनका अन्तर्वस्तुलाई केलाउँदा मानवशास्त्री प्रा. डा. डोरबहादुर विष्टले नेपालको विकासको मूल समस्या बाहुनवाद हो भनै झैँ फेरि पनि बाहुनवादको सोँचबाट ग्रसित एकल नश्लीय/जातीय शासकहरूकै बर्चस्व स्थापित हुने गरी व्याख्या र संरचनाहरू निर्माण हुँदाको उपज हो, अहिलेको असन्तुष्टि र आक्रोश ।
तैपनि, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन त मुखैमा आइ त हाल्यो । यस सन्दर्भमा, आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निर्वाचन राष्ट्रिय भेलाको ‘म्यान्डेट’बमोजिम अस्वीकार गरेको छ । यसको मतलब, आदिवासी आन्दोलनको अस्वीकार हो । त्यसबारे माथि विषद् चर्चा भइसकेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आह्वान गरे झैँ सबै आदिवासी जनता निर्वाचन अस्वीकारै गर्छन् त ? भोट हाल्न जाँदैनन् त ? त्यो पनि सम्भव छैन । आदिवासीको चेतनाको स्तर शासक जातिको जस्तो छँदै छैन, त्यो तितो सत्य हो । यसको अर्थ हो, आदिवासी जनता स्थानीय निर्वाचनमा के गर्ने र के नगर्ने विभाजित छन् र हुन सक्छन् । एकातिर, संविधान र नयाँ संरचनाहरू विभेदकारी नै छन् । अर्कोतिर, आदिवासीको निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी ‘ग्रास रुट’ स्थानीय तहमा नै हो । नेपालकै निर्वाचनको आँकडा केलाउँदा उत्पीडित जाति समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रदेश र संघ (केन्द्र) जस्तो बृहत निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना झन न्यून हुन्छ नै । यसखाले ‘कन्फ्युजन’को परिस्थितीमा आदिवासी जनताले सबभन्दा बढी विवेक पुर्याउनुपर्ने हो तर त्यो पनि चुनौति छ । आदिवासी आन्दोलनले यहीँनेर विवेक पुर्याउनु पर्दछ ।
पहिचानसहितको संघीय प्रदेश नामाकरणका लागि माग गर्दै आदिवासी जनजातिहरु सडकमा ।
पहिलो कुरा, आदिवासीमाथि हुने सबै खाले विभेद र अन्यायका विरुद्ध आवाज उठाउने र संघर्षरत आदिवासी आन्दोलनले अंशमा हुने प्राप्तिलाई मात्र आँकलन गरेर समग्रतालाई नै जोखिममा पार्नु हुँदैन । पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लडाईं आफैमा सजिलो छैन र तुरुन्ता तुरुन्तै प्राप्त भइहाल्न पनि सक्दैन । त्यो कुरा विश्व आदिवासी इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा २ सय ५० वर्ष शासन गरिरहेका नश्लीय जातीवादीहरूले सजिलै आदिवासीको मुद्दा सम्बोधन गर्न दिँदैनन् भन्ने कुरामा कहिँ कतै भ्रममा पर्नु हुँदैन । त्यसका लागि राज्यले गरेका र गरिरहेका विभेदका विरुद्ध लड्नै नै हो । संघर्ष र आन्दोलन नगरी उत्पीडित जाति समुदायले पहिचान र अधिकार पाएको इतिहास पनि त छैन । त्यसका लागि जटिल समय र परिस्थितीमा पनि मुद्दाहरू बचाएरै राख्नुपर्छ । मुद्दा बचाउने भनेको ‘एसिमिलेसन’को मोडेल अपनाएर होइन गलतका विरुद्ध जोखिमै मोलेर कुनै न कुनै रुपमा जति सकिन्छ त्यति ‘रियाक्सनरी’ बाटो अबलम्बन गरेर नै हो । निर्वाचनबाट आमूल परिवर्तन हुने होइन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मात्रै निर्वाचन सहयोगी माध्यम हो । यत्ति कुराको भेद छुट्याउन मात्रै सकियो भने पहिचान र अधिकार प्रात्तिका लागि आदिवासी आन्दोलन कहिँ समर्पण गर्नु पर्दैन । अहिलको परिस्थितीमा आदिवासी आन्दोलनले निर्वाचन विथोल्न सामाथ्र्य राख्दैन भनेर आत्ति हाल्नुपर्ने पनि छैन । लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा निर्धक्कसाथ राख्न सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा स्वीकार्ने मात्र होइन अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि निहित नै हुन्छ । बरु मूल कुरा छोडेर अंशतिर लाग्दा भविष्यका लागि आदिवासी आन्दोलनले विश्वास र आसा गुमाउन सक्नेतर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी छ । त्यो भनेको आदिवासी आन्दोलले स्थापित गरेका मूलभूत मुद्दाहरू उचित तवरले सम्बोधन नभइञ्जेलसम्म अविचलित रूपमा ‘रिजेक्सन’ गरेर ‘एन्टि स्टेट नोसन’मा कार्य सम्पादन गर्नु नै आदिवासी आन्दोलनका लागि उचित वातावरण सिर्जनामा टेवा पुर्याउनु हो । र आदिवासी आन्दोलनले बाटो बिराएको ठहर्दैन ।
दोश्रो कुरा, आदिवासी जनता वैचारिक रुपले विभिन्न दलमा आस्था राख्छन् र सम्बद्ध पनि छन् । त्यो स्वभाविक कुरा हो । संघारमै आएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आदिवासीहरूले पनि आफूसम्बद्ध दलहरूको तर्फबाट र स्वतन्त्र तवराले विभिन्न स्थानीय तहको पालिकाहरूमा उम्मेदवारी दिएका छन् र मत मागिरहेका छन् । यो माहोलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अस्वीकार गर्दैमा समग्र आदिवासी जनता अस्वीकार गर्छन् र निर्वाचनमा भाग लिदैनन् भन्ने कुरा आफैमा आर्दशवादी हुन्छ । त्यसैले जुन–जुन स्थानहरूमा आदिवासी उम्मेदवार निर्वाचन लडिरहेका छन् ती ठाउँहरूमा आदिवासी उम्मेदवारलाई जिताउन आ–आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिँदा आंशिक उपलब्धि नै हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित आदिवासीय जनजातीय संगठनहरू, भाषिक, आदिवासीय धार्मिक संस्थाहरू, परम्परागत संस्थाहरूले बढ्ता ध्यान दिएर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नु रणनीतिक हुन सक्छ र गरिरहेका पनि छन् । यो दल र त्यो दल भन्ने भन्दा पनि आदिवासी जनजातिको मुद्दामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपले प्रतिबद्ध उम्मेदवारहरूलाई आदिवासी मतदाताहरूले सघाउनु र जिताउनु सबभन्दा उत्तम हुन सक्छ । जसले निर्वाचन जितेर भोलिको दिनमा आदिवासी आन्दोलन र मुद्दाहरूलाई महत्वपूर्ण र परिणाममूखी बनाउनमा कार्य गर्न सकोस् । तर पनि एउटा आदिवासीको सन्तानले निर्वाचन लड्दै र मत हाल्दै गर्दा विभेदकारी संविधान संशोधन नभइञ्जेल नेपालको आदिवासी आन्दोलनले निर्वाचनप्रति स्वीकार्यता छैन भन्ने कुरामा कदापि भ्रममा पर्नु हुँदैन । नेफिन आफैमा राजनीतिक दलजस्तो मात्रै कार्य गर्ने संगठन होइन । सबैलाई ज्ञात छ, नेफिनको सीमा, प्रकृति, कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीबारे पनि । नेफिन आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था हुनुको अर्थले जटिलभन्दा जटिल परिस्थितीमा पनि आदिवासीका मुद्दाहरूलाई कहीँ कतै ‘सरन्डर’ नगरी आवेग र उत्तेजनामा आएर क्षणिक र आंशिक लाभको नाममा मूल मर्म र भावनालाई नै जोखिममा कदापि मोल्नु हुँदैन । निर्वाचन भयो र संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर हतास मानसिकता पालिराख्नु पनि जरुरी छैन । सिद्धान्ततः संविधान कार्यान्वयन त संविधान जारीको मितिदेखि नै लागू हुन्छ । बरु प्रश्न संविधानको सर्वस्वीकार्यता माथिको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलालगायत उत्पीडित र सिमान्तकृत जाति समुदायका मुद्दाहरू सही ढंगले सम्बोधन नभएसम्म संविधानको आयू र सर्वस्वीकार्यता कदापि बढ्न सक्दैन ।
छन्त्याल संघीय प्रेस फोरमका अध्यक्ष हुन् ।